Madaxweynaha KG oo Maxkamad lasoo taagayo | KEYDMEDIA ONLINE
BAYDHABO, Soomaaliya – Madaxweynaha Maamulka Koonfur galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa laga gudbin doonaa dacwad, waxaana lala kori doonaa Maxkamadaha dalka, Sida lagu sheegay war ka soo baxay odayaasha dhaqanka beesha Waalmugge, oo maalmaahan kulammo aaya-ka-tashi ah uga socdeen Baydhabo iyo Muqdisho.
Beeshaan oo kamid ah beelaha dega degaannada Koonfur Galbeed, ayaa Lafta-gareen, ku eedeeyay inuu beeshiisa u xoogay halkii kursi ee Waalmugge ku lahayd Baarlamaanka.
"Waxa ay sheegeen in Laftagareen oo fulinaya amarka Farmaajo, uu hore xasuuq ugu geystay dad shacab ah, isla-markaana uu hadda ku daray boob doorasho, “taas ayaa khasab ka dhigeysa maxakamadeynta Madaxweynaha KG," ayaa lagu yiri qoraal Beesha soo saartay.
Kursigaan uu Lafta-gareen boobay oo ka mid ah kuraasta Aqalka Sare ee Baarlmaanka Faderaalka Soomaaliya, waxaa afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay, Senetar Ilyaas Cali Xasan oo ah Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Xisbiga HIMILO QARAN, oo uu hoggaamiyo Sheekh Shariif.
Lafta-Gareen ayaa ku dhaqaaqay tallaabo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ka yaabisay, kadib markii uu kuraasta Aqalka Sare ee maamulkaas ka imaanaya, u xiray kaliya shaqsiyaad ay xidid, xigto iyo xabiib yihiin, isla-markaana uu ka reebay siyaasiyiinta miisaanka culus ee matala shacabka Bay iyo Bakool.
0 Comments Topics: koonfur galbeed soomaaliya